» आस्था राउत प्रकरण : आखिर के भएको थियो प्रहरी चेकिङमा (भिडियोसहित)
३ माघ २०७६, शुक्रबार २१:२५
कलाकार आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको प्रहरी चेकिङ र त्यहाँ भनिएको ‘दुर्व्यवहार’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
आखिर आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चेकिङमा भएको चाहिँ के थियो त ? रातोपाटीलाई विमानस्थल सुरक्षाको समयमा राउतमाथि भएको के थियो भन्ने भिडियो प्राप्त भएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार महिला प्रहरीले नभएर राउतलेचाहिँ महिला प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेकी थिइन् । ‘मलाई चिन्दैन, म को हुँ ? मेरो चेकिङ्ग गर्नुपर्छ र?’ भनेर राउतले उल्टै विवाद गरेको प्रहरीको दाबी छ ।